» फाईनलमा को पुग्ला ?
फाईनलमा को पुग्ला ?
२६ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०८:४६
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २६ मंसिर । विश्वप्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ मा यो साता अन्तिम ३ फाईनालिष्टहरु छानिदैछ । शोका उत्कृष्ट ४ सेमिफाईनालिष्ट जोडीहरु प्रियना आचार्य र शुभम भुजेल, फुलन्देकी आमा उमेश राई र प्रमोद भण्डारी, सुमी मोक्तान र बिजु पार्की तथा बुद्ध लामा र केबिका खत्री मध्ये कुन जोडीले शो छाड्छन् र कुन जोडी फाईनलमा पुग्लान् भन्ने चर्चा यतिखेर दर्शकहरुमाझ छ । निर्णायकको मत धेरै आएता पनि दर्शकबाट थोरै भोट पाउने र निर्णायकको मत थोरै आएपनि दर्शकबाट धेरै भोट पाउने भएका कारण यी जोडीहरुमध्ये कुन जोडीले यस साता शो छोड्लान् भन्ने अनुमान लाउन मुस्किल छ । निर्णायकको मत हेर्ने हो भने बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको बुद्धिका जोडी र सुमी मोक्तान र बिजु पार्कीको सुबिजु जोडी सबैभन्दा सुरक्षित देखिन्छन् । तर गत साता यी दुबै जोडीले तुलनात्मक रुपमा कम मत प्राप्त गरेपछि यो जोडीहरु बटम लाईनमा परेका थिए । त्यस्तै निर्णायकको मत हेर्ने हो भने प्रियना आचार्य र शुभम भुजेलको प्रियम जोडी तथा फुलन्देकी आमा उमेश राई र प्रमोद भण्डारीको आमोद जोडी बढि जोखिममा देखिएका छन् । तर उनीहरुलाई दर्शकको साथ राम्रो भएकोले गत साता उनीहरु बटम लाईनमा परेका थिएनन् । गत साता सबैभन्दा बढी अंक पाउनेमा बुद्धिकाक जोडी र सुविजु जोडी रहेको छ । यी दुबै जोडीले गत साताको दुबै दिनको अंक जोड्दा समान ५९–५९ अंक पाएका थिए । त्यस्तै आमोद जोडीले गत साता दुई दिनको अंक जोड्दा ५४ र प्रियम जोडीले ५० अंक प्राप्त गरेका थिए । गत साता अंकका आधारमा प्रियम जोडी कमजोर देखिएको थियो भने दर्शक भोटका आधारमा बलियो देखिएका थिए । आमोद जोडी सदबहार रुपमा तटस्थ देखिएका छन् भने सुबिजु र बुद्धिका जोडी गत साता निर्णायकहरुको मतका आधारमा बलियो देखिएका थिए भने दर्शक भोटका आधारमा कमजोर देखिएका थिए । तसर्थ यी जोडीहरुमध्ये कुन जोडीले फाईनलमा पाईला टेक्लान् भन्ने अन्दाज गर्न सबैलाई समस्या परेको छ । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–
यी जोडीहरुले हालसम्म पाएका अंकका आधारमा हेर्ने हो भने प्रियम जोडीको २४८ अंक, आमोद जोडीको ३७० अंक, सुबिजु जोडीको ३८६ अंक र बुद्धिका जोडीको ३८० अंक भएको छ । प्रियम जोडी वाईल्ड कार्डपछि मात्र शोमा आएकाले उनीहरुको हालसम्मको अंकमा पनि सबैभन्दा कमी छ भने पहिलो शोदेखिकै अंक हेर्ने हो भने सुबिजु जोडी पहिलो नम्बरमा, बुद्धिका दोस्रो नम्बरमा र आमोद जोडी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ । यी जोडीहरुमध्ये प्रियम जोडीले आजसम्म कुनै अवार्ड पाएका छैनन् भने आमोद जोडी र सुबिजु जोडीले समान १–१ वटा अवार्ड र बुद्धिका जोडील दुई वटा अवार्ड जितेका छन् । यसर्थ अवार्डका हिसाबले बुद्धिका जोडी सबैभन्दा बलियो र प्रियम जोडी सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् । त्यस्तै हालसम्म बटम लाईनमा परेका आधारमा हेर्ने हो भने प्रियम जोडी एकपटक, आमोद जोडी ३ पटक, सुबिजु जोडी २ पटक र बुद्धिका जोडी ४ पटक बटम लाईनमा परेका छन् । यस अर्थमा बुद्धिका जोडी सबैभन्दा बढी खतरामा देखिएका छन् भने प्रियम जोडी सबैभन्दा सुरक्षित देखिएका छन् ।
डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री जोडी कलाकार प्रियना आचार्य र कोरियोग्राफर शुभम भुजेलको जोडी स्टेजमा प्रियम जोडीका नामले परिचित छन् । उनीहरुले यो हप्ता पाउने अंक र दर्शक भोटले नै उनीहरुलाई फाईनलको हकदार बनाउने वा नबनाउने भन्ने तय हुनेछ । फुलन्देकी आमाका नामले चर्चामा आएका हाँस्य कलाकार उमेश राई र कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीको जोडीले तेस्रो हप्ता पर्फाेमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । स्टेजमा आमोद जोडीका नामले परिचित उनीहरुले पनि यो हप्ता ठूलो चुनौतिको सामना गर्दैछन् । नायिका सुमी मोक्तान र कोरियोग्राफर बिजु पार्कीको जोडी शोमा स्टन्टवाला जोडीका रुपमा चिनिएका छन् । स्टेजमा सुबिजु जोडीका नामले परिचित उनीहरुले दोस्रो हप्ता पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । त्यस्तै प्रतियोगितामा भाग लिएका सबै स्टार र कोरियोग्राफरहरुको जोडीहरुमध्ये सर्वाधिक केमेष्ट्रि मिलेको जोडीका रुपमा परिचित बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको जोडीले पनि यो साता कडा चुनौतिको सामना गर्दैछन् । स्टेजमा बुद्धिका जोडीका नामले परिचित यो जोडीले नवौँ हप्ताको पहिलो दिन र एघारौँ हप्ताको पहिलो दिन गरी जम्मा २ पटक पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका छन् ।